ပင်မစာမျက်နှာ - ပင်မ - ကနေဒါ BLI ·ဘာသာစကားများကျောင်းများ
အင်္ဂလိပ် Programs ကို
ညဦးယံအချိန် Programs ကို
လူငယ် Programs ကို
ဗီဇာ & CAQ
ကနေဒါအင်္ဂလိပ် & ပြင်သစ်
Montreal & ကွိဘက်စီးတီး
Montreal ထူးခြားတဲ့မြို့ဖြစ်၏။ တစ်ဦးကမြို့ရှိရာဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့ကြံ။ ပထမဆုံးနေ့ကနေသင်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဥရောပအရသာနှင့်အတူတစ်မြို့။
ဒါဟာစိန့်လောရင့်မြစ်ပေါ်တွင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး '' sa ဘာသာစကားနှစ်မျိုးမြို့။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ကိုသင်ယူပြီးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစွန့်စားမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံပေးရန်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျလာရန်ရွေးချယ်သည့်အခါမျှမကိစ္စ, လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပျော်စရာတစ်ခုခုအမြဲရှိပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်နွေရာသီ, နွေဦး, ဆောင်းဦးသို့မဟုတ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, အပေါ်သွားရာတစ်ခုခုကိုအမြဲရှိပါတယ်။
ကွိဘက်အံ့သြဖွယ်များနှင့်လှပသောမြို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာမြောက်အမေရိကအတွက်ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှု၏စိတ်နှလုံးပါပဲ။ အသစ်ကတိုက်ကြီးအတွက်ဥရောပတစ်အပိုင်းအစ။ စိန့်လောရင့်မြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်ညားမှာ Quebec ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးပါမြို့တနှင့်ကွီဘက်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။
100% ပြင်သစ်ကြောင်းအကြီးဆုံးကနေဒါမြို့အဖြစ်မှာ Quebec ဘာသာစကားကိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီလှပတဲ့မြို့သင်တို့အဘို့ရှိပါတယ်သမျှသောသူတို့ပျော်မွေ့ဖို့စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် !!
BLI သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အစီအစဉ်များတစ်ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံပေးထားပါတယ်။ BLI မှာသင်ရှာဖွေနေတဲ့ program ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
မတူကွဲပြားနေထိုင်ရန် Options ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာထိုင်ခင်းဌာနမှရွေးချယ်ဖို့သင်တို့အဘို့ options အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ အကယ်. သင်ဤသင်ယူမှုအတှေ့အကွုံနထေိုငျနေချိန်မှာသင်လိုအပ်သမျှသောအထောက်အပံ့ကိုလက်ခံရရှိသေချာပါစေ။
ဗီဇာ & CAQ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး
ငါတို့သည်သင်တို့ကောက်နဲ့လွယ်ကူပြီးတတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေအဖြစ်ကနေဒါရန်သင့်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုစေရန်လေဆိပ်မှာသငျသညျကိုချွတ် drop ။
အစဉ်အမြဲငါရှိခဲ့ထားသောအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုမှာ။ ငါပင်စတင်ရန်ခဲ့ကြသည်မသိသော Montreal တွင်ဤနေရာတွင်ဤမျှလောက်ပျော်စရာရှိခဲ့ပါတယ်။ အစားအစာ, လူများ, နေရာများ, သငျသညျလုပျနိုငျသောအရာတို့ကို, သင်လေ့လာသင်ယူသောအရာတို့ကို, နေ့တိုင်းသင်တစ်ဦးကယ့်ကိုအေးမြလမ်းအတွက် Montreal ၏သမိုင်းတစ်နည်းနည်းလေ့လာသင်ယူ
ငါ 100% အကြံပြုနဲ့ကျွန်မနှစ်ကြိမ်ကစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲတဖန်လာလိမ့်မယ်
အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသား - မက္ကစီကို
ကျွန်မကနေဒါမှရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အခါငါမဆိုအင်္ဂလိပ်မဟုတ်သလိုပြင်သစ်မသိခဲ့ပါ။ BLI ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအစီအစဉ်ကို ယူ. ပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးဘာသာစကားများ၌ငါ၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်။ ယနေ့တွင်ငါ TRILINGUAL AM ပြောနိုင်
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးကျောင်းသား - ဘရာဇီး
ကျွန်မအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့ BLI မှာစာရင်းသွင်းနဲ့ကျွန်မထက်နည်း6လအတွင်းမြင့်မားအလယ်အလတ်ကျောင်းသားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆရာကအရမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့သည်သင့်သူတို့သည်သင့်ကိုဆုံးမသွန်သင်သမျှကိုနားလညျပွီးလေ့လာသင်ယူသေချာပါစေ။ အတန်းအလွန်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ငါများစွာသောအဆွေခင်ပွန်းလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျောင်းသားများကိုရှိပါတယ်။
Mingue Kim က
အီးမေးလ်ပို့ရန်Facebook ကတွစ်တာYoutube ကိုInstagram ကို
70,, rue Notre-Dame O. , suite ကို 400
Montreal, QC, ကနေဒါ, H2Y 1S6
763,, rue St-ယောသပ်ကိုအီး, suite ကို 104
ကျူးဘက်, QC, ကနေဒါ, G1k 3C6
ကနေဒါ COPYRIGHT 2017 BLI ·ဘာသာစကားများကျောင်းများ, All Rights Reserved